Uya kuhlala ixesha elingakanani uHamilton kwiDisney +? Nantsi impendulo kaDisney - Itv
Eyona Itv Sukuba nexhala, 'uHamilton' uyakuhlala kwiDisney + ixesha elide
Sukuba nexhala, 'uHamilton' uyakuhlala kwiDisney + ixesha elide
Kuya kude kube nini Hamilton uhlala kwiDisney +?I-Disney +
Malunga nayo yonke i-metric yomntu wokuqala kunye nowesithathu, Hamilton ibiyintsikelelo enkulu kwiDisney +. Abaphathi beDisney bayinyanzela inguqulelo efotyiweyo yesakhono se-Broadway sensation kutsala inani elitsha labantu yabaphulaphuli kwinkonzo yokusasaza entsha. Izifundo ze-Apptopia zigqibe kwelokuba ukhuphelo losetyenziso olutsha lweDisney + lwadubula ngaphezulu kwama-72% eMelika kwimpelaveki ka Hamilton 'Ukukhululwa. Okwangoku, idatha ye-ANTENNA ibonelelwe kwiikhredithi zaBabukeli Hamilton Ukubonelela ngeDisney ngowona mpelaveki ubalaseleyo wokungena kwi-SVOD nawuphi na umdlali ophambili kwi2020.
Kodwa kufanelekile ukukhumbula oko Hamilton yayicwangciselwe ukukhutshwa komdlalo weqonga wango-Okthobha ngo-2021. Zombini iiDisney kunye nabavelisi benkqubo ye-Broadway baceba ukunika inqanaba lokuvelisa ixesha elingakumbi lokufikelela kubaphulaphuli ngaphambi kokulenza lifumaneke kubaphulaphuli ababanzi. Ngokucacileyo, ubhubhane wecoronavirus wazitshintsha ezo zicwangciso. Ngethamsanqa, nokuba iBroadway ibuya ngokukhuselekileyo kwilizwe lasemva kwe-COVID, Hamilton iza kuhlala kanye apho ikhoyo.
Jikelezisa ukufumaneka kweemovie zeDC ngenyanga Kwi-HBO Max ngaphambi kokuba uluntu luphuze umbane ulungelelanise isicwangciso salo sokuphuma. Oku akuyi kuba njalo Hamilton .
BONA KWAKHO: I-Netflix's Most-Watched Recent Movies kunye neMiboniso
Ke kwabo batya ngokukhawuleza babukela umboniso xa ufika kwiDisney + ngoJulayi 3, akukho sidingo sokukhawulezisa iiwotshi zakho ukuba utyekele njalo. Kwaye kwabo bebenenjongo yokujikeleza Hamilton kodwa khange ulifumane kakuhle ixesha, ungakhathazeki. Awubaleki nxamnye newotshi.
Hamilton Ndiza kuhlala kwiDisney + (ndiyaqikelela ukuba kuyenzeka ntoni xa uthenga amalungelo $ 75 yezigidi ).
'UAlita: Ingelosi Yedabi' Imbi Kakhulu, UJames Cameron kufuneka anike uFox I-200 yezigidi zeedola zakhe
Lindela ukubona iiNkonzo ezininzi zoHlahlo-lwabiwo mali kwixa elizayo
Ikhaya lokugqibela lika-Oprah eChicago alisiyonto ubuya kuyilindela
Elona xesha lilungileyo lokuthatha iprobiotic
ukukhangela simahla kweeselfowuni
leliphi elona xesha litsha lokungabi nazintloni
Uxolo ngokunihlupha ngeofisi yeebhokisi
iipilisi ezikunceda ukunciphisa umzimba
mingaphi imartha raddatz abc iindaba